Million मिलियन ऑनरaएक हप्तामा सुरक्षित Androidsis
दायरा निर्माता Huawei बाट सम्मान यो वास्तवमै राम्रो काम गर्दैछ। यो ब्रान्ड युरोपेली बजारमा उन्मुख, टर्मिनलहरूको एक श्रृंखला प्रदान गर्दछ जुन उनीहरूको ब्याट्री र पैसाको लागि तिनीहरूको अविश्वसनीय मूल्यको लागि बाहिर खडा हुन्छ।
हामीले पहिले नै तपाईंलाई धेरै थोरै आदर टर्मिनलहरूका रहस्यहरू देखाउँदछौं, जस्तो कि 3C आदर गर्नुहोस् वा सम्मान गर्नुहोस् 4X। अब समय आयो नयाँ सम्मान फ्ल्यागशिपको बारेमा कुरा गर्ने। र यो यो हो कि चीनमा यसको प्रक्षेपण पछि एक हप्ता पछि, नयाँ ऑनर ले7मिलियन युनिटहरू आरक्षित गर्न सफल भइसकेको छ।
चीनमा million मिलियन ऑनरaएक हप्ता भन्दा कममा आरक्षित छन्
यो फिगर को लागी धन्यवाद Honor7ब्राण्डको पहिलो उत्पादन बन्न यस्तो उच्च मांग उत्पन्न गर्न। यद्यपि यो कमको लागि होइन यदि हामीले यस शक्तिशाली मोबाइल फोनको प्राविधिक विशेषताहरुलाई ध्यानमा राख्यौं।
Honor7सुरु गर्न यो मेटामा निर्मित छl टर्मिनलमा एक प्रीमियम टच दिने जुन जनताले धेरै मन पराउँदछ। अर्कोतर्फ हामी वास्तवमै शक्तिशाली फोन फेला पार्दछौं, .5,2.२ इन्च स्क्रिनको साथ पूर्ण एचडी रिजोलुसन छ।
यसको सिलिकॉन मुटुaद्वारा गठन गरिएको छ हाय सिलिसन किरीन 935०, आठ कोर कोरले २.२ घगाहर्ट्झ सम्मको घडीको गतिमा पुग्छ जुन यसको शक्तिशाली माली टी 2.2 जीपीयू र GB जीबी र्याम मेमोरीको साथ, तपाइँलाई कुनै समस्या बिना कुनै पनि खेलको मजा लिन अनुमति दिनेछ।
आन्तरिक मेमोरीको सन्दर्भमा, Honor7प्रस्ताव dसाधारण विन्यास 16 64 जीबी सम्मको १ XNUMX जीबी देखि विभिन्न कन्फिगरेसनहरू सबै पूर्ण मोडेलका लागि, यद्यपि ती सबैमा माइक्रो एसडी कार्ड स्लट समावेश छ जसले उपकरणको क्षमता १२ 128 जीबीसम्म बढाउनेछ।
अर्को महान हाइलाइट यसको हो फिंगरप्रिन्ट रिडरs टर्मिनलको पछाडि अवस्थित छ वा यसको शक्तिशाली २० मेगापिक्सलको सोनी एक्समोर IMX20 क्यामेरा, सोनी सेन्सरको मामलामा मुकुटमा गहना।
र अपरेटि system प्रणालीको संस्करण? खैर, यस मामला मा Honor का केटाहरूले यो कढ़ाई गरेको छ। यद्यपि एशियाली निर्माताका अन्य टर्मिनलहरू अघिल्ला संस्करणहरूसँग आउँदछन् Honor7beats Android 5.0 लाई धन्यवाद।
ठीक छ, फोन धेरै राम्रो छ र यो धेरै सुन्दर छ, तर के यो स्पेन पुग्नेछ? यद्यपि यो पहिले नै केहि अनलाइन स्टोरहरूमा उपलब्ध छ 320२०-370० युरो सम्मको मूल्यहामीले के सिक्यौं, सेन्सर7सेप्टेम्बरमा बजारमा आउने आशा गरिएको छ।
मैले भने, Honor हरेक दिन यस क्षेत्र मा एक बेंचमार्क हुन बढी कारणहरु देखाउँदै छ। Huawei को लागी १०
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Huawei » Million मिलियन ऑनर one एक हप्तामा सुरक्षित
नोकिया यहाँ म्याप सार्वजनिक बीटा एन्ड्रोइड मा जारी गरियो